Ny US Treasury dia manondro ny andrimpanjakana ara-bola Rosiana manohana ny fanalavirana ny sazy Koreana Avaratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny US Treasury dia manondro ny andrimpanjakana ara-bola Rosiana manohana ny fanalavirana ny sazy Koreana Avaratra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny departemanta amerikanina misahana ny harena ambanin'ny tany (OFAC) dia nanambara ny fanendrena ny orinasa rosiana iray izay nanampy an'i Korea avaratra hisoroka ny sazy hiditra amin'ny rafitra ara-bola iraisam-pirenena. Ny hetsika anio dia mikendry ny Fikambanana ara-bola rosiana voasoratra anarana Rosiana mifanaraka amin'ny Executive Order (EO) 13382 satria nanome, na nanandrana nanome, ara-bola, ara-pitaovana, teknolojia, na fanohanana hafa, na entana na serivisy ho fanohanana an'i Dandong Zhongsheng notendren'i Etazonia. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), orinasa iray izay tompony sy fehezin'ny, mivantana na tsia, US- sy United Nations (UN), Banky mpivarotra vola vahiny (FTB), Korea Avaratra voalohany.
“Ny Treasury dia manohy mampihatra ny sazy misy any Etazonia sy ny Firenena Mikambana manoloana ny olona sy ny fikambanana any Russia sy ny toerana hafa izay manamora ny varotra tsy ara-dalàna amin'i Korea Avaratra. Ireo izay manandrana misarika ny fahefantsika hanome ny DPRK fidirana amin'ny tsena ara-bola iraisam-pirenena dia mety hampidi-doza sazy lehibe ", hoy ny sekretera lefitra misahana ny asa fampihorohoroana sy ara-bola Sigal Mandelker.
Nanomboka nanolotra serivisy ara-bola ho an'i Korea Avaratra avy hatrany ny Fikambanana ara-bola rosiana rehefa nahazo ny fahazoan-dàlana ho an'ny fikambanana mpampindram-bola tsy miankina amin'ny banky, izay mamela ny fiarahamonina ara-bola rosiana hiasa amin'ny vola vahiny maro. Ny Fikambanana ara-bola rosiana dia nanome kaonty amin'ny banky ho an'i Dandong Zhongsheng notendren'ny OFAC ary ho an'ny filoha solontenan'ny Korea Zinc Industrial Group, izay notendrena ihany koa hiasa amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany ao amin'ny toekarena Koreana Tavaratra ary nivarotra, namatsy na nifindra zinc. avy any Korea Avaratra, izay mety ahazoan'ny Governemanta Korea Avaratra fidiram-bola na entana azo.
Hatramin'ny taona 2017 farafaharatsiny ary nitohy hatramin'ny taona 2018, ny Fikambanana Rosiana ara-bola dia nanokatra kaonty banky marobe ho an'i Dandong Zhongsheng. Ireo hetsika ireo dia nahafahan'i Korea Avaratra nanodinkodina sazy amerikana sy ny Firenena Mikambana mba hiditra amin'ny rafitra ara-bola manerantany mba hahazoana fidiram-bola ho an'ny programa nokleary an'ny fitondrana Kim.
Dandong Zhongsheng dia notendren'i Etazonia ho fananana na fehezin'ny, mivantana na ankolaka, FTB, fikambanana iray izay voasakana ny fananany sy ny tombotsoany araka ny EO 13382. I Han Jang Su, ny solontenan'ny FTB any Moskoa, dia nandray anjara lehibe tamin'ny fahazoana serivisy amin'ny banky avy amin'ny Fikambanana ara-bola Rosiana. Han Jang Su dia notendren'ny Etazonia tamin'ny 31 martsa 2017, noho ny fiasa ho an'ny na amin'ny anaran'ny, na mivantana na tsia, FTB. Na i Han Jang Su na i FTB dia notendren'ny Komitin'ny filankevitry ny filaminan'ny Firenena Mikambana araky ny fanapahan-kevitra 1718 (2006).
Fikambanana ara-bola rosiana no andrim-panjakana farany ara-bola rosiana nahazo fankatoavana avy amin'ny OFAC amin'ny fanomezana tolotra ara-bola an'i Korea Avaratra. Tamin'ny volana aogositra 2018, OFAC dia nanendry ny Banky Ara-barotra Agrosoyuz voasoratra anarana Rosiana noho ny fanatanterahana na fanamorana ny fifanakalozana lehibe tamin'ny anaran'ny Han Jang Su.
Vokatry ny hetsika androany, ny fananana rehetra sy ny tombontsoan'ny fananan'ity tanjona ity izay any Etazonia na amin'ny fananana na fifehezana ny olona amerikana dia tokony hosakanana ary hotaterina amin'ny OFAC. Ny fitsipiky ny OFAC amin'ny ankapobeny dia mandrara ny fifampiraharahana ataon'ny olona amerikanina na ao Etazonia (ao anatin'izany ny fifanakalozana ao Etazonia) izay misy fananana na tombontsoa amin'ny fananan'ny olona voasakana na voatondro.